YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, April 27
ဘူးသီးတောင်မြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှဝန်ထမ်းတဦး စစ်တပ်အထက်အရာရှိ၏ရိုက်နှက်ခံရ
Share Arakan News
ဘူးသီးတောင်မြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်သူရုံးအကူ မောင်ထွန်းလှဖြူ သည်ဘဏ္ဍာငွေသယ်ယူရာတွင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်သွားစဉ် .. ပြည်နယ်ရုံးမှ ဘူးသီးတောင်မြို့အ တွက်စာထည့်ရန်ရှိသည်ဟုခေါ်သ ဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရင်းတန်းလန်း ပြည်နယ်ရုံးမှကြီးကြပ်ရေးမှုးဒေါ်လှမေထံသို့သွားရောက်ခဲ့ပါသည် ။
စာအဆင်သင့်မဖြစ်သေးသဖြင့်နောက်တခေါက်လာခဲ့ရန်ပြော၍ပြန်ဆင်း ပြီးခရိုင်ဘဏ်ခွဲတွင်အလုပ်ဆက်လုပ်နေခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ပြီးခါနီးနောက်တခေါက်ပြည်နယ်ဘဏ်သို့တက်ရောက်ပြီး ကိုယ့် မြို့နယ်အတွက်ထည့်မည်စာကိုသွားရောက်ယူခဲ့ရာ ပြည်နယ်မန်နေဂျာမှ သူ့အားခေါ်သဖြင့် ပြည်/ဂျာအခန်းသို့ဝင်သွားခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်ရုံးကိုဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့လာရမလားဆိုပြီးစားပွဲပေါ်မှာရှိ သည့်ရေဘူးနဲ့ပစ်ဖေါက်သဖြင့်ရှောင်လိုက်ရာလွှတ်သွားခဲ့ပါသည်။နောက်ထပ်မံပြီးဖန်ခွက်ဖြင့််ပစ်ရာဦးခေါင်းနောက်စေ့ကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်သ ဖြင့်
ဦးခေါင်းကွဲသွားခဲ့ရပါသည်ဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ပြီးဆေးကုသရာ ၁၂ ချက်ချူ ပ်ခဲ့ရပါသည်။ (ဤနေရာတွင်တခုပြောချင်ပါသည် ပြည်သူ့ဆေးရုံကဆေးစာမပါဘဲ ဘာလို့ဆေးကုသရတာလည်း...ဒါရာဇဝတ်မူ့ဘဲ..ဆေးစာမပါရင်မကုသနိုင်ဘူးဆိုလို့ရတယ်...ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားကိုဆုံးမတယ်ဆိုရင်ပါးစပ်နဲ့ဆုံးမလို့ရတယ်..
စာထုတ်ပြီးထုချေလွှာတောင်းလိုက်ရင်လည်းရတဲ့ကိစ္စကို မြန်မာနိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတိုင်း သိကြမှာပါ...)
၁၂ချက်ချူ ပ်ခံရသည့်ဝန်ထမ်း မောင်ထွန်းလှဖြူခမျာကိုယ့်အထက်အရာရှိကိုကြောက်သည်ကတကြောင်းအလုပ်ပြုတ်မှာကြောက်တာကတကြောင်းဘာဆို
တကယ်လို့ အဲ့ဒီဝန်ထမ်းလေးကဒါဏ်ရာကြောင့်သေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်/ဂျာ ကြီးသူ့မိသားစုအတွက်တာဝန်ယူပေးမှာလား.,..?
အထက်ဖားအောက်ဖိတတ်တဲ့မြို့နယ်မန်နေဂျာထွန်းမြ အေး ကရောဘယ်လောက်ထိကူညီပေးနိုင်မှာလည်း ..? အဲဒါဝန်ထမ်းဘဝရဲ့ ဒုက္ခတွေလား...?
BY YeYint Nge ... 4/27/20140comment
စိတ်ဝင်စားစရာ မောင်းပြန် သေနတ် ကိုယ်စီ နဲ့ တရုတ် နိုင်ငံသား လူငယ် ၈ ယောက်
ဘဘဦးဝင်းတင်၏ ဦးလေး ဦးမျိုးကျော် အား ဦးတင်ဦးမှ နှုတ်ခွန်းဆက် ဂါရပြု
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပဲခူးတိုင်း အုတ်ဖိုမြို့နယ် ကပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြ
၉၆၉ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှ ရိုက်နှက်သည်ကို အရေးမယူပေးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံ လာရောက် တိုင်ကြား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့အိမ်ရှေ့မှာနှစ်ရက် တိုင်တိုင်တွေ့ခွင့်တောင်းခံနေသော ဆရာတော်ဦးစန္ဒမာလာ နဲ့ ယောဂီအဖွဲ့မှာ ထားဝယ်မြို့  လောင်းလုံရပ်မှဖြစ်ပြီး လုံးကြီးပြင်ဘုရားကုန်းရပ်မှာသီတင်းသုံးနေစဉ် မဘသဆရာတော်လေးပါးမှ ဆွဲထုတ်ဖယ်အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြောင်း ထားဝယ်မြို့မှာဆက်လက်နေထိုင်မရအောင်နှောင့်ယှက်ခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပေမယ့ အရေးယူတာမျိုးမရှိတာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လာရောက်တွေ့ဆုံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ပုံပါ ဘုန်းကြီးဦးစန္ဒမာလာမှာ ထားဝယ်မှ ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပြီး ၄င်းအား ထားဝယ်မှ ၉၆၉ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှ ရိုက်နှက်သည်ကို သက်ဆိုင်ရာက အရေးမယူပေးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံ လာရောက် တိုင်ကြားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ
ဓါတ်ပုံ - လူရမ်းကား (၂၇-၄-၂၀၁၄)
ဦစန္ဒမာလာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိသားစုဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းမှတွေ့ဆုံစဉ်။
Photo Myo Khine
၅၄ ခြံရှေ့တွင်ရောက်ရှိနေသောအရှင်စန္ဒမာလာဘုန်းဘုန်းအား အဘဦးဝင်းထိန်မှလျောက်တင်မေးမြန်းနေစဉ်
စိတ်ဝင်စားစရာ မောင်းပြန် သေနတ် ကိုယ်စီ နဲ့ တရုတ် ...
ဘဘဦးဝင်းတင်၏ ဦးလေး ဦးမျိုးကျော် အား ဦးတင်ဦးမှ...
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပဲခူးတိုင်း အုတ်ဖ...